सोचे जस्तो हुन्न जीवन ! तर ….
एउटा नेपाली गीत छ दिनेश अधिकारीको रचनामा तारादेवीले गाउनु भएको, ‘सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, देखे जस्तो हुन्न जीवन !’ हुन पनि यो गीत हामी धेरैको जीवनसँग ठ्याकै मेल खान्छ। मेरो आजको यो लेख पनि यही सेरोफेरोमा अर्थात हाम्रो जीवनको महत्वाकांक्षा, सपना, भोगाई, सोचाई र देखाईको वरिपरि केन्द्रित छ।
यो संसारमा धेरै उदाहरणहरु छन्, जो बिपन्न परिवारमा जन्मेर पनि पछि सम्पन्न भएको र सम्पन्न परिवारमा जन्मेर पछि कंगाल भएको। किन त्यस्तो हुन्छ ? के यो भगवानको देन हो वा आफ्नै कर्मको फल हो ? मलाई लाग्छ मानिसले जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल पाउँछ। सत्मार्ग, सत्कर्म र मेहेनतको फल हो सफलता। हरेक मानिस कुनै न कुनै कुरामा योग्य हुन्छ। हामीले यो संसारमा कुनै मानिस देखेको छौ जुन दोश्रो मानिससँग रुप, बुद्धि, विचार र गुणमा ठ्याकै उस्तै हुन्छ ? बिल्कुल हुँदैन। त्यसैले हरेक मानिस आफैमा बिशेष हुन्छ। यदि हरेक मानिस आफैमा बिशेष हुन्छ भने किन उ सफल हुँदैन ? त्यसको एउतै कारण हो – सबै मानिसले आफ्नो गुण पहिचान गर्न सक्दैनन् र मौका वा अवसरको फाइदा लिन सक्दैनन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, भदौ २५, २०७४ ०७:२७:४५